संसदमै भक्कानिएर रुने गजेन्द्रबहादुर महत मात्रै हैन, यी पनि हुन् रुन्चे सांसद – Nepal News
संसदमै भक्कानिएर रुने गजेन्द्रबहादुर महत मात्रै हैन, यी पनि हुन् रुन्चे सांसद
हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद गजेन्द्रबहादुर महत सदनको रोस्टममै रोएर एकाएक चर्चामा एक छन् । सम्भवतः रोस्टममै पुगेर बोल्दाबोल्दै भक्कानिने उनी नेपालकै पहिलो सांसद होलान् ।
सरकारले प्रस्तुत बजेटमा थोरै रकम विनियोजन गरेको र मन्त्रीहरूले सांसद पदकै अपमान गरेको भन्दै उनी रोएका हुन् । तर उनी एक्ला रुन्चे सांसद भने होइनन् । नेपालमै कयौं जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक रूपमै रोएका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् ।
हेरौं कति जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक रूपमा रोए र किन:
नेपाली काँग्रेसबाट दोस्रो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका खड्क बहादुर बस्याल धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारि समक्ष काभ्रेका अजित मिजारको हत्याको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्ने क्रममा रोएका थिए । मिजारको २०७३ साउनमा रहस्यमय हत्या भएको थियो । उक्त हत्या उनले बाहुन केटीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण भएको आशंका गरिएको थियो ।
वर्तमान प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका एक मात्र सांसद राजेन्द्र लिंगदेन पनि सार्वजनिक रुपमै रोएकाले रुन्चे सांसद हुन् । झापा क्षेत्र नं. ३ बाट चुनाव जितेर आएपछि पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको हातबाट सम्मान थप्ने क्रममा उनी भावुक भएर रोएका थिए ।
हुन त रेशम चौधरीले सांसद पदको शपथ नै लिएका छैनन् । तर उनले कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट ठुलो मतान्तरले चुनाव जितेका कारण उनी जनताले चुनेका प्रतिनिधि भने हुन् ।
टीकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख आरोपी ठानिएका चौधरी उक्त घट्नापछि फरार थिए र उनले फरार रहेकै अवस्थामा वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका चौधरी राजपाबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।
पछिल्लो पटक उनले अदालतमा आत्मसमर्पण गरे र उपचारका क्रममा वीर अस्पतालको कोठा नं. २९०मा राखिएका उनी राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर भेट्न आउँदा भक्कानिएका थिए ।
सांसद तथा कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेल डब्बु क्षेत्री निर्देशित चलचित्र राहदानीको एक दृश्य देखेर क्यामेरा अगाडि नै भावुक भएको समाचारहरू आएका थिए ।
पूर्व गृहमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य रहेका पूर्बहादुर खड्का पनि रुन्चे संसदमा गनिएका छन् ।
सुशील कोइरालाले केपी शर्मा ओली विरुद्ध उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका बेला काँग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठकमा उनी ‘भारतले फसाएको’ भन्दै रोएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सभासद रहेका बलबहादुर केसी २०७२ सालमा ‘सगरमाथा संरक्षण अभियन्ता सम्मान प्रदान’ गर्ने क्रममा क्यान्सर रोगबाट पिडित रहेका सम्मानित पर्यटन व्यवसायी वाङ्छु शेर्पाको अवस्था देखेर भावुक बनेका थिए ।
२०६९ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभा भङ्ग भएपछि त्यसबारे पत्रकारहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा नेकपा माओवादीका नेता नारायण श्रेष्ठ रोएका थिए।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’:
भावुक भएर रुनेमा प्रचण्डको नाम पनि आउने गर्दछ । २०७५ जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरणको घोषणाका क्रममा बोल्दै गर्दा भावुक भएर उनको गला अवरुद्ध भएको थियो ।
बेलायतमा पनि रोएका छन् सांसदहरू
सन् २०१६ डिसेम्बरमा एक महिला सांसदले आफ्नो दुःखपीडा सुनाउँदा बेलायती संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा उपस्थित सभामुखसहित सबै सांसद रोएका थिए।
५१ वर्षीया स्कटिस सांसद मिशेल थमसनले १४ वर्षको उमेरमा आफूमाथि बलात्कार भएको पीडा संसदमा सुनाएकी थिइन् ।
ट्याग्स: Runche Sansad